Job in Admin/Human Resources, Other, Advertising and Food & Restaurant in Hmaw Bi and Thingangyun | Yangon Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Yangon - Yangon Directory | Yangon Yellow Pages
Job in Admin/Human Resources, Other, Advertising and Food & Restaurant in Hmaw Bi and Thingangyun
by Myint Dachan Co.,LTD. on 05 October, 2020
1. Collect sample,organized and conduct product and then report to operation head
2. Evaluate raw material and finished product in
3. Repeats inspection procedure until product meets quality standards and specifications are attained
4. Design and execute laboratory testing according standard procedures, make observations and interpret findings
5. Cleaning, sterilizing, maintaining, and calibrating laboratory equipment
၁. ကုန်ကြမ်း နှင့် ကုန်ချော နမူနာများ အား ကောက်ယူကာ စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းရန်
၂. ကုန်ကြမ်း နှင့် ကုန်ချော များ၏ အရည်အသွေး ကို စစ်ဆေးရန်
၃. ကုန်ကြမ်း နှင့် ကုန်ချော များ၏ အရည်အသွေး ကို စက်ရုံ မှ သတ်မှတ်ထားသော အရေးအသွေး အား ပြည့်မှီသည်အထိ စစ်ဆေးရန်
၄. ဓာတ်ခွဲခန်း သတ်မှတ် စံနှုန်းနှင့် အညီ နမူနာများကို စစ်ဆေးပြီး ရလာဒ် များကို အထက် မန်နေဂျာအား တင်ပြပေးရန်
၅. ဓာတ်ခွဲခန်း အတွင်းရှိ စက်ပစ္စည်းများ နှင့် အခြား ဓာတ်ခွဲ ရာတွင် အသုံးပြုသော ကိရိယာများကို သန့်စင်အောင် ဆေးကြောရန် နှင့် လိုအပ်ပါက ပိုးသတ်ရန်။ စက်များကို လည်း သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ကျရောက်လျှင် ကာလီဘရိတ်ရှင်း လုပ်ပေးရန်။
B.Sc(Industrial Chemistry, Bio Chemistry and Chemistry)
4 years experience in quality control
Must have knowledge physical condition and endurance
B.Sc (Industrial Chemistry, Bio Chemistry and Chemistry) နှင့် ဘွဲ့ရရှိသူ
အလုပ်အတွေ့အကြုံ ၄ နှစ်နှင့် အထက်ရှိရန်
English4skills ကျွမ်းကျင်သူ